Mudaharaad Taayiro La Gubay Iyo Dhagxaan Lagu Xidhay Wado Mihiim Ah Oo Ka Dhacay Hargeysa | Araweelo News Network (Archive) -
Mudaharaad Taayiro La Gubay Iyo Dhagxaan Lagu Xidhay Wado Mihiim Ah Oo Ka Dhacay Hargeysa
Hargeysa(ANN) Dadweynaha Xaafada Xera Awr oo ku taala woqooyi galbeed ee magaalada hargeysa ayaa sameeyay mudaharaad, kuwaas oo gebi ahaanba xidhay wado xaafadooda dhexmarta. Kadib markii ay barqadii maanta wadadaa ka buuxiyeen dhagxaan, isla markaana
ku gubeen Taayiro.
Mudaharaadka xaafadaa ka dhacay oo ah kii labaad ee ay sameeyaan labadii bilood ee u danbeeyay ayaa ka dhashay. Kadib markii ay dawlada Hoose ee Hargeysa ku guuldaraysatay balanqaad hore oo ay dadka xaafada ugu sheegtay inay wadadaa dhisayaan, balse ay waxba ka qabanweyday wadadaa iyo inay fuliso balantaa, iyagoo taa bedelkeedana jidka laamiga ah ee Masjid Nuur oo godadka iyo xorfadaha noqday ka buuxiyeen Ciid horaantii bishii hore, laakiin ay wax talaabo ah qaadi waayeen, taas oo ka dhigtay wadada mid boodh iyo habaas fara badan oo gaadiidku ka kicinayaan ay dadweynaha ka cadhaysiiyay.
Dadka xaafada ayaa qaarkood u sheegeen shebekada wararka ee Araweelonews inay ka cadhoodeen ciida ay dawlada Hoose ka buuxisay wadada oo dadka u keentay saxa xumo. Sidaa awgeed ay door bidayaan in aanay gaadiidku marin wadada haddii aan la dhisayn oo aan waxba laga qabanayn, “Markay tagaan ayaanu ku celinaynaa dhagaxa, mana aqbalayno inaanu ku jirno xaalada noocan ah.” Sidaa waxa tidhi mid ka mid ah haweenka xaafada oo waqtigaa wadada qarkeeda taagnayd.
“Waxaanu doonaynay in wadada naloo dhiso ee maanu doonayn inay dawlada Hoose maalinba iska rogooyin ciid ah ku shubto oo caruurtayadu u ekaato dad xabaalo soo qoday.” Sidaana waxa ku dhawaaqday haweenay kale oo ka mid ah dadka xaafada.
Ciidanka Bilsyka ayaa xili danbe gaadhay halkaa, iyadoo ay dadweynaha mudaharaadayay gebi ahaanba xidheen wadadaa oo ay ka buuxiyeen dhagxaan, isla markaana Taayiro ku gubeen, taas oo keentay inay Basaska xaafada Xero Awr oo wadadaa mara iyo gaadiidka kaleba ka caageen. Dhawr saacadood. Waxaana markii danbe dhagxaanta laga buuxiyay wadada iyo Taayirada lagu gubay halkaa ka guray ciidanka Bilayska oo gaadhay goobta, iyadoo uu Taliyaha guud ee ciidanka Bilayska Somaliland goobta yimi.
Masuuliyiinta dawlada Hoose ayaan goobta wadada la xidhay ka muuqan, isla markaana Maayarka Caasimada Eng. Jiciir oo aanu isku daynay in aanu wax ka weydiino sababta wadadaa wax looga qaban waayay ayaanay noo suurta gelin inaanu helo.